Shukulaatada shukulaatada shukulaatada sida loo kariyo (HEART) - Entremet
Cake Shukulaatada Muraayadaha Madow
Cunnadan muraayadda muraayadda muraayadda muraayaddu waxay ka dhigaysaa qalbi shukulaato qurux badan dhalaalaya oo leh lahjad dhalaalaysa oo dahab ah
Waxaan qirayaa inaan yara qabatimay sameynta keegga muraayadda muraayadda laga sameeyo! Had iyo jeer waxaan sameeyaa muraayad keeg muraayad muraayad leh oo midab leh oo marmar leh laakiin waxaan doonayay inaan isku dayo gacanteyda miis qurxinta shukulaatada shukulaatada xumaata waana ku faraxsanahay natiijada! Muraayadda shukulaatada shukulaatada waa mid dhalaalaya! Runtii waxay lamid tahay sidii muraayad lagu fiiriyo oo aad u qurux badan.
Cuntadan miiska shukulaatada ah ee muraayadda shukulaatada ah waxaa laga sameeyey shukulaatada mousse, kareemka la kariyey ee xasilloon oo lagu daray miraha 'strawberry' iyo shukulaatada joconde Qabooji ilmahaas adag ka dibna ku dhalaal dhalaalkaaga muraayadda shukulaatada!
Cuntada loogu talagalay shukulaatada wadnaha muraayadda muraayadda shukulaatada
Keegani wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo kala duwan sidaa darteed ka hor intaadan bilaabin, waxaad u baahan kartaa inaad daabacdo dhammaan cuntooyinka loo baahan yahay keeggan. Haddii aad rabto inaad isticmaasho waxyaabo yar yar gebi ahaanba waad awoodaa! Si aad uga dhigto mid aad u fudud kaliya isticmaal mousse malab oo ku dabool glaze shukulaatada.
Cunto Muraayad Shukulaatada Cunto ah
Recipe Muraayadda Muraayadda (dahabka)
Cunto Kariim ah oo la kariyey oo la kariyey
Cunnooyinka 'Strawberry Puree Recipe'
Shukulaatada Joconde Recipe
Sida loo soo ururiyo keegga muraayadda muraayadda ah
Si aad u sameysid muraayaddaada muraayadda muraayadda muraayadda, waxaad u baahan doontaa muraayada muraayadda muraayadda. Midkan, waxaan isticmaalayaa mid ka mid ah kuwa aan ugu jeclahay, qalbiga wadnaha.
Ku billow inaad gudaha ku daboosho xoogaa muus ah shukulaatada. Waxaan u isticmaalaa dhabarka qaadada si aan si siman u carqaladeeyo burcadka. Kadib barafee illaa 15 daqiiqo.
Ka dib gudaha ku duub lakabka khafiifka ah ee kareemka la kariyey. Qaado qiyaastii 1/4 koob oo ah kareemka la kariyey ee xasilloon kuna dar dhawr qaado oo miraha miraha loo yaqaan 'strawberry'. Haddii aadan rabin inaad iskaa u sameysato waad isticmaali kartaa macaanka strawberry laakiin ha ku darin wax sonkor ah oo budada ah kareemkaaga xasilloon ama aad ayey u macaan doonaan macaanka strawberry.
Ku faafi lakabka kareemka strawberry-ka kareemka la kariyay. Ka dib jarjar qayb ka mid ah jooniskaaga shukulaatada qaab wadne ah kuna cadaadi lakabka strawberry-ka. Ku buuxi farqiga kareem badan oo dabool gadaasha keega sidoo kale. Ku jilci sheyga oo dhan iskuna qabooji (ugu yaraan 2 saacadood).
sameynta dhadhanka keega sanduuqa sida rootida rootida
Sidee loo sameeyaa muraayad shukulaatada muraayadda loo yaqaan 'glaze cake glaze'
Si aad ugu diyaar garowdo muraayaddaada muraayadda shukulaatada, dhig tiradaada ugu horreysa ee biyaha, sonkorta iyo caano macaan oo la galiyay digsi suugo oo isku kari isku kari heerkulka med / sare ka dibna ka bax dabka. Ha u oggolaan inuu gubto!
Ku daadi gelatin-kaaga tiro labaad oo biyo ah una ogolow inay ubaxdo 5 daqiiqo.
Ku rid gelatin aad ubaxday isku dar caanaha isku walaaqaya oo walaaq ilaa uu dhalaalayo.
Shub shukulaatada / kookaha isku dar isku dar ah oo fadhiiso 5 daqiiqo ka dib hoos u dhig ilaa inta ay ka hagaagayso. Waxaan isticmaalaa isku-darka quusin ka dib afuufista si aan uga baxo buro badan intii suurtogal ah.
Kadib ku shub muraayadda muraayadda adoo miiraya mesh miiraha si aad uga saarto wixii burooyin ah ee haray.
sida loo sameeyo boodh cufan oo la cuni karo
Daalo dhalaalaya ha qaboojiso ilaa 90ºF ka hor intaadan dhalada ku shubin keegaaga barafoobay. Haddii aad dhakhso u daadiso, dhammaantood way ka wada dhammaan doonaan keega. Haddii aad ku shubtid aad u qabow markaa ma noqon doonto mid siman. Waxaan aad ugula talinayaa heerkulbeeg dijitaal ah si aad ula socoto sida qabowgaagu u fiicanyahay oo marmar u walaaq si loo hubiyo inuu si siman u qaboojinayo.
Sida loo sameeyo muraayad dahabi ah oo dahab ah
Waxaan sameeyay tijaabo yar oo ku saabsan sameynta muraayad dahabi ah oo dahab ah oo keeggan ah waana jeclaaday sida ay noqotay. Waxaan ogaaday in muraayadda muraayaddu ay tahay mid hufan ka dib markii ugu horreysay ee aad sameysay oo aad isweydiisay haddii aan ku daray xoogaa midabaynta cuntada macdanta ah haddii ay dhalaali lahayd.
Gabi ahaanba way shaqeysay! Muraayadda muraayadda dahabka ahi waxay ahayd guul! Waxaan la aaday ilaa 1 tsp of TMP super dahab boodh laakiin waxaad sidoo kale isticmaali kartaa boodhka dhalaalaya dahabka.
Si aad u sameysid dahabka muraayadda muraayadda muraayadda dahabka ah si fudud u samee miiskaaga muraayadda muraayadda caadiga ah sida caadiga ah laakiin ha ku darin midabaynta midabbada cad. Bedelkeeda, ku dar midabaynta cuntada macdanta ah. Waxaan isticmaali jiray dahab laakiin waxaad isticmaali kartaa midabyo kale!
Waxaan ka helay dhaldhalaalka muraayadda dahabka ah sida lahjadda wanaagsan ee keegga muraayadaha shukulaatada.
Sida loogu shubo dhaldhalaalka muraayadda muraayadda muraayadda muraayadda
Ka jar sabuuradda keega qaab wadne ah si aad keega u dhigatid. Dhig keegga koob yar ama digsi keeg ah oo dhig taangiga weyn gudaha si aad u qabato muraayada muraayadda ah ee dul marta dhinacyada keega si aad ugu isticmaasho keega kale.
Ku shub muraayaddaada muraayadda shukulaatada marka hore ka dibna ku daadi xargaha dahabiga ah haddii aad rabto. Daaha dhalaalaya u daa ilaa inta dhalaalku ka istaagayo daadinta. Isticmaal mindi kulul si aad u gooyso dhibcaha oo aad u nadiifiso geeska keega hoose.
U wareeji keegga saxan oo ku raaxeyso isla markiiba ama qaboojiyaha illaa aad rabto inaad u adeegto laakiin keegga ayaa waayi doona dhalaalaya wuxuuna u muuqanayaa matoor ka dib 24 saacadood markaa haddii ay tahay macmiil, dhalaal isla maalinta aad bixinayso.
ogow: uma baahnid inaad u isticmaashid dhammaan waxyaabahaan keega, waxaad isticmaali kartaa kaliya mousse toos ah ama kareemo la kariyey iyo berry. Adiga ayay kuu tahay waxa aad ku buuxiso muraayaddaada muraayadda muraayadda muraayadda! Noqo qof hal abuur leh oo isticmaal waxyaabaha aad ka hesho.
Keeggan shukulaatada dhalaalaya ee muraayadda dhaldhalaalka ah waxaa laga sameeyey malab mousse, kareem la kariyey oo strawberry ah iyo jocon shukulaato ah. Daaweyn aad u liidata oo loogu talagalay munaasabad gaar ah! Waqtiga Diyaarinta:1 saac Waqtiga karinta:labaatan daqiiqado waqtiga qaboojinta:30 daqiiqado Wadarta Waqtiga:1 saac labaatan daqiiqado Kalori:2966kcal
Shukulaatada Joconde (hal qalbi)
▢konton garaam bur yicib
▢42 garaam sonkorta budada ah
▢12 garaam bur keeg
▢1 dhan ukun cad
▢7 garaam sonkorta
▢17 garaam sabdo dhalaalay
▢4 garaam budada kookaha
Shukulaatada Malabka Shukulaatada
▢3 oz shukulaatada madow
▢1.5 oz malab
▢1/2 tsp ruug madow
▢5.5 oz kareem culus
Kareemka la kariyey ee Strawberry
▢4 oz kareemka karbaashka culus
▢laba tsp sonkorta budada ah
▢1/2 tsp budada gelatin
▢1 Tbsp biyo qabow
▢1/2 tsp soosaarida vanilj
▢3 oz jajab strawberry ama macaanka
Muraayad shukulaatada dhalaalaysa
▢350 garaam shukulaatada madow
▢40 garaam budada kookaha
▢120 garaam biyo
▢300 garaam sonkorta
▢200 garaam caano macaan oo macaan
▢1 Tbsp vanilj
▢100 garaam biyo qabow
▢shan iyo toban garaam gelatin budo ah
Muraayad Dahabi ah oo Dahab ah
▢150 garaam sonkorta
▢100 garaam caano macaan oo macaan
▢2.5 oz biyo
▢16 garaam gelatin budo ah
▢laba oz biyo
▢180 garaam shukulaatada cad
▢1 Tbsp budada dahabka
Tilmaamaha Mona Lisa
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad kululeyso foornadaada illaa 425ºF / 230ºC. Isku dardar burkaaga yicibta, sonkorta, iyo daqiiqda si aadan u yeelan wax buro ah.
Markaa waa inaad ku dhex qastaa ukunta oo dhan burka illaa inta ay ka hagaageyso.
Baaquli gooni ah, ukumo ku karbaash meelaha sare oo jilicsan oo si tartiib ah ugu dar sonkorta. Sii wad jeedal jeedinta si aad u adkeysid meelaha dhaadheer ee qoyan. Haddii ay bilaabaan inay burburaan waxaad si xad dhaaf ah u karbaashay ukuntaada cad mana jirto hab lagu badbaadiyo.
Kadib meeriskaaga isku laabo isku dar ilaa intaad isku dardartay. Hubso inaadan ka badin isku darka ama aad u qallafsanaato oo aad jebiso dhammaan hawada aad ka sameysid dhaladaada ama waxaad yeelan doontaa keeg aad u siman.
Si tartiib ah ugu walaaq subagga la dhalaalay iyo shukulaatada isku dhafan.
Ugu dambeyntiina, ku walaaq isku-darka sariirtaada silikoonka ah ee loo diyaariyey ama keegga keega oo dubo 8 daqiiqo. Hubso inaadan ka badinin keegaaga.
Marka keegaaga la qaboojiyo, ku rushee lakabka khafiifka ah ee sonkorta granulated dusha sare ee keega oo ku dabool duub balaastig ah. Ha fadhiisto habeenkii qaboojiyaha. Sonkorta ayaa ku milmi doonta keega natiijada, keegga wuxuu ahaanayaa mid qoyan xitaa haddii hawo ay ku jirto. Cool huh!
Shukulaatadaada dhig dhig baaquli cadeynta kuleylka dheriga biyaha isku qasan si aad u dhalaasho. Keen malabkaaga kaliya karkar oo ka qaad dabka Ku rid jaallaha beedkaaga baaquli weyn oo caddeyn kara kuleylka. Ku dar 1/3 ee malabkaaga kulul kuna xoq illaa inta ay ka siman tahay. Kadib ku dar inta kale ee malabkaaga ah kuna kari ilaa inta jaallo ah ay ka weynaanayaan Ku dar ukuntaada isku darka shukulaatada dhalaalay oo xoq si aad iskugu darsato Ku karbaasha kareemkaaga culus dusha sare oo jilicsan oo si tartiib ah ugu laabo salkaaga shukulaatada illaa inta laga helayo xariijimo Ku shub caaryada oo barafee
Kareemka Strawberry la kariyey
Ku daadi gelatin biyo qabow oo u oggolow inuu ubax yeesho 5 daqiiqo. Ku dhalaal gelatin 5 sekan microwave-ka. Haddii aan si buuxda loo dhalaalin samee 3 ilbidhiqsi oo kale Baaquli isku-dhafan oo qabow, ku karbaasha kareemkaaga culus dusha sare Ku dar sonkortaada budada ah iyo vaniljiga Mashiinkaaga hoos ugu soo celi hoosna ugu daadi gelatin-kaaga oo isku qas ilaa kareemka la kariyay ay ka samaysmaan taag adag Ku laalaadi khalkaaga miraha 'strawberry' galay badh ka mid ah kareemka la kariyay. Qeybta kale u keydi gadaasha keegga mousse.
Hubso inaad haysato qalabkan gacanta: Mesh mesh filterka, heerkulbeegga, blender blender Ku dar shukulaatada iyo budada kookaha baaquli weyn oo caddeyn kara kuleylka oo dhinac iska dhig. Ku daadi budada gelatin xaddiga labaad ee biyaha oo u oggolow ubax ilaa 5 daqiiqo. Ku dhaji tirada ugu horeysa ee biyaha, sonkorta, caanaha macaan ee la kariyey digsi digsi oo isku kari ilaa kuleylka dhexdhexaadka ah. Ku dar gelatin ubaxeed oo walaaq illaa gebi ahaanba dhalaalay oo ka saar dabka. Ku dar faniinkaaga. Shubka ku shub shukulaatada / kookaha oo ha istaag 5 daqiiqo ka dib u dhig si aad isugu darsato. U isticmaal qashin-qumanka wax lagu shubo si aad uga saarto wixii ku haray ama shukulaatada aan la karin Ku dhaji isku dar ah shaandhada mesh si aad uga saarto wax yar oo ka mid ah shukulaatada ama gelatin U oggolow isku-darka qaboojiyaha 90ºF ka hor intaadan ku shubin keegaaga barafoobay.
Ku dar sonkorta, caanaha macaan ee macaan, iyo tirada ugu horeysa ee biyo digsi dhex-dhexaad ah oo kuleylka kuleylka dhexdhexaadka ah, marmar walaaq. Ku shub tirada labaad ee biyaha gelatin budada ah kuna qas qaado. U daa si aad si buuxda u nuugto daqiiqado yar. Marka sonkorta, caanaha iyo biyaha isku dar ah ay bilaabaan inay iskulaabtaan, ka qaad dabka kuna dar gelatin ubaxeed. Walaaq illaa gelatinku uu milmo. Dheecaanka kulul ku shub dusha jajabyada shukulaatada ka tag oo fadhiiso 5 daqiiqo si aad u dhalaasho. U adeegso shaah si aad u kiciso dhalaalka illaa inta uu shukulaatada gebi ahaanba dhalaalay. Kudar boodhka dahabka ah kuna dar qaso isku dubaridka ilaa aad sifiican isku qasan tahay. Dhaldhalashada dhaldhalaalka iyada oo loo marayo miiraha wanaagsan si looga saaro burooyinka. U daa glaze si uu u qaboojiyo. Marka muraayaddu qaboojiso 90º F / 37º C, ku shub doolshaha qaboojiyaha ah ee ku jira koobka dushiisa, adoo ku fadhiya saxaarad ama saxan gees leh si ay dhibcaha u qabtaan. Ka tag muraayadda si aad u dhigto 5 daqiiqo ka hor intaadan isticmaalin mindi kulul si aad uga saarto dhibcaha. U wareeji keegga saxan oo ku raaxeyso isla markiiba ama qaboojiyaha ilaa aad u baahato. Maskaxda ku hay in muraayadda muraayaddu lumiso iftiinkeeda 24 saacadood ka dib markaa haddii aad tan uga dhigayso macmiil, dhalaal isla maalinta la keenayo.
Kalori:2966kcal(148%)|Kaarboohaydraytyada:283g(94%)|Protein:81g(162%)|Dufan:180g(277%)|Dufan Dufan:51g(255%)|Kalastarol:1082mg(361%)|Sodium:875mg(36%)|Kaliumperyamper:401mg(kow iyo toban%)|Fiber:22g(88%)|Sonkor:202g(224%)|Vitamin A:3120IU(62%)|Kaalshiyam:574mg(57%)|Bir:12.4mg(69%)
sida loo sameeyo shukulaatada dhalaalay mid dhalaalaya
sida loo isugu toosiyo keeg laba jibbaaran
sideen u xasiliyaa kareemka la shiiday
sida loo sameeyo keega arooska oo laga soo bilaabo xoq
halka laga iibsado isomalt aniga ii dhow
samee keeg sanduuq dhadhamiya guriga